Ndị Mmekọ | Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd.
Royal Foods VietNam Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị nrụpụta kachasị ukwuu nke Sardine Mkpọrọ, Mackerel na mba ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, n'okpuru aha akara aha "Nwanyị Nwanyị Atọ Nwanyị Na-esi nri" nke bụ nke ụwa niile kwenyere ma tụkwasị obi.
Hlọ ọrụ Khanh Hoa Salanganes Nest bụ ụlọ ọrụ na-eduga n'ịchịkwa na nrigbu nke akụ na ụba dị ọnụ ahịa na VietNam. Site na ihe karịrị afọ 20 nke mmepe mmepe, Khanh Hoa Salanganes Nest Company na-agbasi mbọ ike imepụta ma gbanwee ngwaahịa ya iji webata ngwaahịa dị elu na ahịa ma weta uru nri nke salanganes n'ụlọ ndị ahịa.
E guzobere Mayora Group na 1977 ma kemgbe ahụ etolitela bụrụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ a ma ama na ụlọ ọrụ ngwa ahịa ngwa ngwa ngwa ngwa. Ihe mgbaru ọsọ nke Mayora bụ ka ọkachasị nhọrọ nke ihe oriri na ihe ọ byụ byụ nke ndị na-azụ ahịa ma nye ndị bara uru na gburugburu ebe obibi uru bara uru.
Achọpụtara Wings dị ka otu ụlọ ọrụ azụmaahịa siri ike ma nwee amamihe na Indonesia nwere ike dị ukwuu n'ịme ncha ncha na nchacha. A na-ahụ ngwaahịa ngwaahịa nku n'ihi ịdị mma ha na oke ego ha, dịkwa na njikere.
Ekele DTS igwe dị elu na ọrụ pụtara ìhè, DTS nwetara ntụkwasị obi nke Wings, na 2015, Wings webatara DTS nkwụghachi na igwe nri maka ngwa noodles ndị ọzọ na-arụ ọrụ.
Dika onye ndu ahia nke Thailand na onye na-ebuputa ihe ndi ozo a na-etinye na nkpuru ahihia, mfp na egosiputa otutu ahia nke sitere na mmiri oyibo na ude, mmiri oyibo, ahihia oyibo, rue mmanu oyibo.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-ewepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% nke ego ha nwetara site na mbupụ na ahịa zuru ụwa ọnụ - gụnyere ndị nọ na Europe, Australasia, Middle East na North America.
"EOAS" bụ aha na-esi ísì ụtọ na mmanụ na-esi ísì ụtọ kemgbe 1894. Ebe ọ bụ na 1999 EOAS dị ka nnukwu onye na-ebupụ mmanụ na Sri Lanka. Site n'afọ 2017, EOAS nwere ohuru ohuru nke mmiri ara ehi akọrọ.DTS na-enye akụrụngwa site na onye na-ekpo mmiri, onye na-azacha ihe, onye na-ekpocha ọkụ, onye na-ekpocha ihe, wdg. iji gbasaa ahịa ha.
E guzobere Ceylon Beverage Can na 2014 dị ka ite aluminom nwere onwe ya ma mechie nrụpụta dabere na Colombo Sri Lanka. N'ihi na ha mkpọ kọfị oru ngo nke OEM maka Nestle, DTS enye retort, full akpaka Loader unloader, eletriki Trolley wdg
Brahims (akara nke Dewina Food Industries) bụ otu ihe na-atọ ụtọ, na-adaba adaba, ọ dị njikere iri nri. Anyị na-enye ha sterilziation retort maka ha, dochie Japan ika. Ihe ntughari na-eji ezigbo mma ma jiri ya tụnyere otu n'ime ndị na-emepụta ihe na Japan, ndị ahịa na-enye DTS ekele dị ukwuu dị ka n'okpuru:
Delta Food Industries FZC bụ Free Mpaghara Company dabere na Sharjah Airport Free Mpaghara, UAE guzobere na 2012. Delta Food Industries FZC's product range had: Tomato Paste, Tomato Ketchup, Evaporated Milk, Sterilized Cream, Hot Sauce, Full Cream Milk Powder, Oats, Cornstarch, na Custard ntụ ntụ. DTS na-enye usoro mmiri mmiri abụọ na mmiri na-agba mmiri maka mmiri ara ehi na ude mmiri.
Na 2019, DTS meriri oru kọfị dị njikere ị ofụ ihe ọestụ ofụ nke ụlọ ọrụ Nestlé Turkey OEM, na-eweta akụrụngwa zuru ezu maka mmiri ịgba agba mmiri mmiri, yana itinye igwe GEA na Italy na Krones na Germany. Ndị otu DTS mejupụtara ihe ndị achọrọ maka akụrụngwa akụrụngwa, usoro siri ike na nke ọma, mechara nweta otuto nke ndị ahịa njedebe, ndị ọkachamara Nestlé si United States na ndị ọzọ na South America.
Bonduelle bụ ụdị izizi nke inine esichara na France iji mepụta akara pụrụ iche nke akwụkwọ nri mkpọ a na-akpọ Bonduelle "Touche de," nke enwere ike iri ma ọ bụ oyi. Okpueze rụkọrọ ọrụ ọnụ na Bonduelle ịzụlite otu ngwugwu nkwakọ ngwaahịa a nke nwere ụdị akwụkwọ nri anọ dị iche iche: agwa uhie, ero, chickpeas na ọka dị ụtọ.
Na 2008, dts nyere sterilizer mmiri zuru oke na nestle qingdao factory na china maka ịmịpụta mmiri ara ehi mkpọ. Ọ gara nke ọma ịgbanwe otu ụdị akụrụngwa emere na germany. Na 2011 dts wetara ụdị 12 nke dts-18-6 nke na-agbanwe agbanwe na jinan yinlu (ikike nke 600cpm) maka imepụta congee agwakọta.